ထင်အောင် – နေရောင်ခြည်မှ လူသားတွေအတွက် လောကနိဗ္ဗာန်တည်ဆောက်ကြပါစို့ | MoeMaKa Burmese News & Media
(မိုးမခပေးစာ) စက်တင်ဘာ ၉၊ ၂၀၁၄
ကမ္ဘာပေါ်တွင်လျှပ်စစ်စွမ်းအားကို အလင်းရောင်အတွက် အသုံးပြုရန်အတွက်သာ မူလကအသုံးပြုခဲ့ ကြပါတယ်။ စက်မှုခေတ်ကိုပြောင်းလာသောအခါ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာ သုံးစွဲ လာကြပြန်ပါတယ်။ ဘော်ရွှီဗစ်အရေးတော်ပုံအပြီး ဆိုဗီယက်ယူနီယံတည်ထောင်ခဲ့သူ လီနင်က တိုင်း ပြည်ထူထောင်ရန်အတွက်အရေးအကြီးဆုံးက လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်အချက်ပဲ လို့ပြောခဲ့ပါ တယ်။လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကနေ လောကနိဗ္ဗာန်တည်ဆောက်ရမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ် တရာနီးပါးကပြောခဲ့တဲ့သူရဲ.့ စကားကခုထိမှန်နေပါသေးတယ်။ လူရဲ.့ အင်အားကိုသက်သက်သာ သာသုံးပြီး ကုန်ုထုတ်စွမ်းအားကိုတိုးတက်စေရန်အတွက် အသုံးပြုသော ခေတ်မှီစက်ကြီးများကို လျှပ်စစ်စွမ်းအားဖြင့်သာ လည်ပတ်စေနိုင်ပါတယ်။
ရှေးဦးစွာလျှပ်စစ်အားရစေရန် ကျောက်မီးသွေးသုံးစက် ကို အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ သို့သော်ရေရှည်တွင် သဘာဝသယံဇာတများ ဆုံးရှုံးလာရခြင်း၊ ပတ်ဝန်း ကျင်လေထုညစ်နွမ်းလာရခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများကျမ်းမာရေးထိခိုက်လာခြင်းများကြောင့် ရေအားမှလျှပ် စစ်စွမ်းအင်ရအောင် တည်ထွင်လာကြပြန်ပါတယ်။ ရေတံခွန်ကြီးများကို ဆည်ကြီးများတည်ဆောက်ကာ ရေကိုသိုလှောင်ထားကာ ရေအားဖြင့်စက်များကိုလည်ပတ်စေခဲ့ပါတယ်။ ကာလကြာရှည်လာသောအခါ ရာသီဥတုဖေါက်ပြန်မှုများကြောင့် ရေသိုလှောင်မှုနည်းပါးလာခြင်း၊ စက်များကြံ့ခိုင်မှုလျော့ နည်းလာခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာကာ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားလျော့ကျလာခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါစက်ရုံများ အသစ်တည်ဆောက်ရပြန်ပါတော့တယ်။ ရေအားရရန် စီးဆင်းနေသောမြစ်များကို ပိတ်ပင်ကာ ဆည်အသစ်များ တည်ဆောက်ရပြန်ပါတယ်။ မူလရှိပြီးသားဒေသခံတွေရဲ.့ အိမ်ယာများ၊လယ်ယာများကို ပြောင်းရွေ.့ ရတဲ့အတွက် ဒေသခံတွေရဲ့ ငြိုငြင်မှုကိုလည်း ခံရပြန်ပါတယ်။ မြစ်ရေစီးကြောင်းပြောင်း သွားတဲ့အတွက် မြစ်ကိုအားထားနေရသူများမှာလည်း ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာပြန်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဒီလိုစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပြသနာပေါ်နေကြပါတယ်။
ဒါကြောင့်သိပ္ပံပညာရှင်တွေက အလကားဆုံးရှုံးနေသောလေအားမှ စွမ်းအင်ကို ထုတ်လုပ်ကြပြန်ပါတယ်။ လေရဟတ်ကြီးများ တည်ဆောက်ကာ လေအားဖြင့် လေရဟတ်ကိုလည်စေကာ လျပ်စစ်စွမ်းအားကိုရစေပါတယ်။ သို့သော် လေရဟတ်များသည် လေတိုက်အားကောင်းသောကွင်းပြင်များတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်ကြပါတယ်။ မြို.့ ပေါ်၌အသုံးပြုရန် ခက်ခဲသည့် ဆိုးကျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သိပ္ပံပညာရှင်တွေက လေကဲ့သို့ပင် အခမဲ့သုံးနိုင်မည့် နေရောင်ခြည်ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သို့ ပြောင်းသုံးရန် တီထွင်ကြံစည်လာကြပါတယ်။
နေရောင်ခြည်သည် နေရာတိုင်းမှာရနိုင်သောကြောင့် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို လျှပ်စစ်အား ရနိုင်သောအခွင့်လမ်းတခု ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဆည်မလို၊ လေရဟတ်မလိုသော်လည်း ဆိုလာပြားတော့ လိုလာပြန်ပါတယ်။ ဆိုလာပြားသည် နေရောင်ခြည်ကိုစုတ်ယူထားကာဘက်ထရီအိုးများဖြင့် လျှပ်စစ်အားများကို သိုလှောင်ထားလိုက်ပါတယ်။ လိုအပ်သောအချိန်ကျမှ ထုတ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလာပြားသည် နေရောင်ကို လုံးဝမမြင်ရသည့်တိုင် နေရောင်ခြည်များကို သိုလှောင်ထားနိုင်သောစွမ်းအားရှိသောကြောင့် ဘက်ထရီအိုးများကို အလွယ်တကူအားပြန်ဖြည့်နိုင်ပါတယ်။ ရေအားစွမ်းအင်ကဲ့သို့ လိုင်းကြိုးများ ဆက်သွယ်ရန်မလိုခြင်း၊ လေအားစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သလို ရဟတ်စင်မြင့်များ မလိုအပ်ခြင်းများက နေစွမ်းအင်၏အားသာချက်များ ဖြစ်ပါတယ်။
အဓိက စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ဆိုလာပြားများ လိုသလို၊ ထိုဆိုလာပြားများကို ကိုင်တွယ်အသုံးချတတ်သော ပညာရှင်များ လိုနေပါသေးတယ်။ ဆိုလာပြားတတ်ဆင်ရေးပညာ သင်ယူထားသောလျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာများ ရှိနေပါ တယ်။ အရပ်သားအင်ဂျင်နီယာပညာရှင်များနည်းတူ တပ်မတော်သားပညာရှင်များလည်း ရှိကြပါတယ်။ အရပ်ဘက်၊ စစ်ဘက် မခွဲခြားပဲ တကယ်တတ်သောပညာရှင်များကို အသုံးချခြင်းအားဖြင့် ပြည်သူပြည်သားအားလုံး နေရောင်မှရသောစွမ်းအင်ကို အသုံးပြုနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရှင်များရဲ့ ဘွဲ့လက်မှတ်မှာသူရဲ့အရည်အချင်းကို အတိအကျသတ်မှတ်ထားပေးပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ တာဝန်ရှိပြီး တတ်ကျွမ်းသူများက စစ်ဆေးလိုက်ခြင်းဖြင့် အမှန်တကယ်ကျွမ်းကျင်သော ဆိုလာပညာရှင်များ ထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
မဇ္ဈိမသတင်းဋ္ဌာနမှသတင်းအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကမ္ဘာတတိယအကြီးဆုံးဆိုလာစက်ရုံကြီး တည်ဆောက်မယ်လို့ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဋ္ဌာနနဲ့ အိမ်နီးနားချင်း ထိုင်းနိုင်ငံကကုမ္ပဏီတခုတို့ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးကာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံတခု တည်ဆောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းကိုသာ အောင်မြင်အောင် အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ခဲ့ပါကလျှပ်စစ်စွမ်းအားအတွက် ပူစရာသိပ်မလိုတော့ပါဟု ပြောနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုမည့်စက်ပစ္စည်းများ ကောင်းမွန်၍ အဆင့်အတန်းရှိရန်တော့ လိုပါတယ်။ ထိုင်းနဲ့လုပ်မှာဆိုတော့ နဲနဲတော့စိတ်အေးရပါတယ်။ အရင်ကလို သုံးပြီးသားမီးစက်တွေကို ဆေးပြန်သုတ်ကာ ယူလာတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့ သတိထားရပါမယ်။ ဒါတွေကို စစ်ဆေးရန် တတ်ကျွမ်းတဲ့ပညာရှင်များ လိုအပ်နေပါတယ်။ အငြိမ်းစားယူပြီးသား ပညာရှင်များ၊ အရပ်ဘက်ကအစိုးရဝန်ထမ်းများ၊ ပြင်ပမှပညာရှင်များ၊ တပ်မတော်မှ အမှန်တကယ်တတ်ကျွမ်းသူများစုပေါင်းကာ စီမံကိန်းအောင်မြင်အောင်ပူးပေါင်းကူညီ သင့်ပါတယ်။ တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း တကယ်တတ်ကျွမ်းနားလည်သူတွေကိုသာ စေလွတ်သင့်ပါတယ်။ ပညာရှင်တွေကိုလည်း တတ်ထားသောပညာနဲ့ အသုံးချသောနေရာကို မှန်ကန်အောင်နေရာချထားပေးမယ်ဆိုရင် နေရောင်ခြည်ကနေ လျှပ်စစ်စွမ်းအားတွေကို လိုသလောက်ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး ကျွန်တော်တို့ တနိုင်ငံလုံး လောကနိဗ္ဗာန် တည်ဆောက်နိုင်တော့မယ့် အချိန်ကို မှုန်ဝါးဝါးတွေ့နေရပြီလို့ တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
မိုးမရွာလို့ ရေအားနည်းနေတယ်၊ လေငြိမ်နေလို့ ရဟတ်မလည်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေကို ကြားရ ဖတ်ရတော့မှာမဟုတ်ပဲ ဖယောင်းတိုင်ထုတ်လုပ်သူတွေက နေကြတ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းတာတွေပြောင်းတော့မှာကိုသာ သတိထားရပါတော့မယ်။ လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးကို အဓိကထား လုပ်ဆောင်ကြခြင်းဖြင့် နေရောင်ခြည်မှ စွမ်းအားကို ဆိုလာပြားမှတဆင့် လောကနိဗ္ဗာန်တည်ဆောက်ကြပါစို့လို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
(ဓာတ်ပုံ – ဆိုလာပြားနှင့် အားသွင်းထားသည့် ဘက်ထရီ (ဓာတ်ပုံ – ကြယ်ပြာ/ ဧရာဝတီ))